AliExpress | December 2019
Ahoana ny fisoratana anarana ao amin'ny AliExpress
Isan'andro dia mitombo hatrany ny zava-misy, mametraka ny mpanohitra marefo indrindra amin'ny fividianana aterineto amin'ny fidirana amin'ny fivarotana aterineto. Safidy goavana, vidiny sarobidy, ny fahafahana mahita zavatra izay tsy hita ao amin'ny fivarotana mahazatra ao amin'ny firenena mpividy. AliExpress amin'io lafiny io dia tsy misy fifaninanana, fa ny sehatra varotra lehibe indrindra iraisam-pirenena.
Hahazo ny fonosana amin'ny AlIExpress
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ireo mpampiasa AliExpress dia mandoa ny anjaran'ny liona amin'ny fiandrasana ny fonosana, mihevitra fa raha tonga izany, dia ny zavatra rehetra dia misy. Mampalahelo fa tsy izany. Ny mpividy rehetra ao amin'ny fivarotana iray ety anaty aterineto (na iza na iza, fa tsy AliExpress fotsiny) dia tsy maintsy mahafantatra amin'ny antsipiriany ny fomba fandefasana entana amin'ny alàlan'ny paositra mba hahafahana mandà izany amin'ny fotoana rehetra ary hamerina azy amin'ny mpandefa.
Ahoana no ahitanao ny laharana finday ao amin'ny parcel ao amin'ny AliExpress
Aorian'ny fametrahana ny baiko ao amin'ny AliExpress, dia miandry fotsiny ny fividianana efa ela. Na izany aza, mila manara-maso io dingana io. Soa ihany fa azo atao izany amin'ny fampiasana tolotra fanaraha-maso manokana. Izany fampahalalana izany dia omen'ny alin'ny AliExpress tenany sy ireo loharano hafa. Saingy noho izany dia mila code rehetra izy rehetra.
Fanovana ny banky amin'ny alàlan'ny AliExpress
Karatra banky plastika dia tena mora amin'ny fandoavam-bola amin'ny varotra an-tserasera, anisan'izany AliExpress. Na izany aza, tsy tokony hadino ny olona iray fa ny karatra dia manana ny daty nahaterahany, ary aorian'izay dia midika izany fa misy ny fanavaozana. Eny, ary tsy mahagaga raha very na manapaka ny karatrao. Amin'izao toe-javatra izao dia ilaina ny manova ny laharana karatry ny loharanom-baovao mba hahazoana vola avy amin'ny loharano vaovao.
Tsy afaka mankany AliExpress aho: ireo antony lehibe sy vahaolana
Ny AliExpress, indrisy, dia afaka manome fahafaham-po amin'ny fananana tsara, fa koa mba hampalahelo. Ary tsy momba ny baikon'ny marefo, fifandonana amin'ny mpivarotra sy ny fahaverezan'ny vola. Ny iray amin'ireo olana mety hitranga amin'ny fampiasana ny serivisy dia ny tsy fahafahan'ny banika miditra ao. Soa ihany fa manana ny vahaolana tsirairay ny olana rehetra.
Mitadiava marary amin'ny alàlan'ny AliExpress
Matetika matetika no mitranga fa tsy ampy ny fitaovana fitadiavam-pitadiavana raha mitady finday ao Ali. Ireo mpividy efa za-draharaha amin'ity serivisy ity dia mahalala ny fomba ahafahan'ny fikarohana sary manampy. Saingy tsy ny rehetra no afaka mahatsapa izany. Amin'ny ankapobeny, misy fomba roa lehibe ahitanao ny vokatra ao amin'ny AliExpress amin'ny sary na ny sary.
Alefaso ny mombamomba ny AliExpress
Ny mpampiasa AliExpress tsirairay dia mety hampijanona ny kaontiny voasoratra anarana amin'ny antony samihafa. Izany dia misy fomban-draharaha manokana fanesorana. Na eo aza izany dia malaza fa tsy ny rehetra no mahita ny toerana misy azy. Fampitandremana ny vokatry ny famindrana ny profil amin'ny AliExpress: Ny mpampiasa dia tsy afaka mampiasa ny asan'ny mpivarotra na ny mpividy amin'ny fampiasana kaonty remote.
Manokatra fifandirana ao amin'ny AliExpress
Mampalahelo fa tsy amin'ny ankamaroan'ny tranga rehetra dia afaka mankafy ny fividianana tadiavina ny baikon'ny AliExpress. Ny fahasahiranana dia mety ho hafa tanteraka - tsy azo tratra ny entana, tsy voatsabo, tonga amin'ny endrika tsy mety, sy ny sisa. Ao anatin'izany toe-javatra izany, dia tsy tokony hampidina ny oronao ianao ary hitomany ny loza. Ny hany làlana dia ny manokatra fifandirana.
Checkout amin'ny AlIExpress
Ny fangatahana avy amin'ny AliExpress dia mora, haingana ary mahomby. Eto anefa, mba hisorohana ny tsy fifankazahoana, ny dingan'ny fametrahana entana dia natao amina dingana maromaro mba hifehy ny lafiny rehetra amin'ny fifanakalozana. Tokony hodinihina izy ireo ka tsy hisy olana intsony. Ny fametrahana entana amin'ny AliExpress Ao Ali, misy fepetra ilaina mba hiarovana ireo antoko roa hanafoanana ny mety hisian'ny hosoka.
Ireo safidy rehetra amin'ny Payment amin'ny AliExpress
Matetika ny mpampiasa aterineto an-tserasera dia mandany fotoana bebe kokoa hisafidianana vokatra fa tsy mividy entana. Saingy matetika dia tsy maintsy mandinika ny fandoavam-bola. AliExpress amin'io lafiny io dia manome safidy malalaka amin'ny safidin'ny safidim-bola mba ahafahan'ny mpanjifa mametraka mora foana ny fividianana.
Password Recovery amin'ny AliExpress
Matetika dia mitranga izany fa ny olona dia afaka manadino na dia ny zavatra manan-danja aza, avelao ny maromaro maromaro, litera sy marika. Soa ihany, na AliExpress aza dia manana fomba fanarenana manokana ho an'ireo izay nanadino na nanary azy. Io fomba fanao io dia ahafahanao miditra amin'ny kaontinao amin'ny ankamaroan'ny tranga azo atao.
Mametraka adiresy eo amin'ny adiresy AlIExpress
Nividy ny vokatra AliExpress nalefa eran'izao tontolo izao. Ny fandefasana dia azo atao na amin'ny biraon'ny paositra na akaiky amin'ny sehatra tsy miankina mivantana amin'ny toerana havanana - izany dia miankina amin'ny fifanarahana amin'ny mpanjifa. Noho izany dia tena zava-dehibe ny mameno ny angona adiresy araka ny tokony ho izy mba tsy hiditra ao anaty fonosana.
Manaraka ny baiko ao amin'ny AliExpress izahay
Aorian'ny fividianana ny entana ao Ali dia manomboka ny dingana lava sy sarotra indrindra - ny andrasana amin'ny fandefasana. Ny fe-potoam-piasany dia mety miankina amin'ny halavan'ilay sambo. Mba hahazoana antoka fa tena marina ny miandry, dia misy fotoana iray hanaraha-maso ny dia ny vokatra tianao. Fanaraha-maso ny entana Maro ny mpivarotra mampiasa ny serivisy iraisam-pirenena.
https://termotools.com mg.termotools.com © AliExpress 2019